Dagaal afka ah oo ka dhex-qarxay Fiqi iyo Xoosh
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirka Dastuurka Soomaaliya, Cabdi Xoosh Jibriil ayaa soo bandhigay muuqaal uu kasoo muuqday Xilldhibaan Axmed Macalin Fiqi, oo ah Xoghayaha Xisbiga Daljir, islamarkaana kamid ah Gollaha Sacabka Soomaaliya.
Muuqaalka Axmed Fiqi oo la qabtay 2016-kii ayaa wuxuu si kulul uu ugu eedaynayaa dowladii waqtigaasi jirtay oo uu hogaamiye ka ahaa Xasan Sheekh, isaga oo ku eedaynaya musuq-maasuq baahsan, xili uu ku sifeeyay madaxdii waagaas "Tuugo".
Xoosh ayaa isbarbardhig ku sameeyay hadal-jeedinta uu xiligaasi sameeyay Fiqi, oo uu ku weeraray maamulkii Xasan Sheekh, iyo inuu haatan Xilldhibaanka uyahay Xasan Sheekh mid u olalaynaya inuu mar kale kusoo laabto Kursiga Villa Soomaaliya.
Fiqi uu kasoo jawaabay dhaliilaha iyo muuqaalka uu soo bandhigtay Wasiirka Dastuurka Soomaaliya, ayaa wuxuu cod dheer ku sheegay in musuqii uu waagaasi ka qaylinayay uu ka "xun yahay midka haatan jira, oo uu iska indha tirayo Wasiir Xoosh".
"Musuqa aan waqtigaasi ka hadlayey waxaa ka xun midka hadda dalka ka jira, oo uu iska indha tirayo Wasiir Xoosh, oo isagaba Ajnabi u gacan geliyay Dastuurka, taasoo aanan jirin musuq-maasuq ka wayn," ayuu ku yiri Fiqi qoraal uu boggiisa Facebooka soo dhigay.
Dagaalka afka ah ee ka dhex-qarxay Xilldhibaan Axmed Macalin Fiqi iyo Wasiirka Dastuurka Soomaaliya, Cabdi Xoosh Jibriil ayaa wuxuu kusoo beegmayaa xili haatan uu socday guux siyaasadeed oo ku aadan in la dhisayo Isbaheysi wayn oo mucaarad ah, kaasoo ay ku midaysan yihiin siyaasiyiin saaxafada siyaasada dalka saamayn ku leh.
Fiqi oo kamid ah xubnaha sida wayn u dhaliila dowladda uu hogaamiyo Madaxwayne Farmaajo ayaa kamid ah siyaasiyiinta Xisbiga Daljir kuwooda ugu magaca wayn, islamarkaana qayb ka ah Isbaheysiga wayn ee dhowaan lagu dhawaaqayo.
Cali Yare, oo kamid ahaa dhalinyaradii ka qeyb-qaatey Ololihii doorashada Farmaajo 2016, islamarkaana hadda kamid ah ragga ku xiran Villa Somalia ayaa qoraal uu soo dhigay boggiisa Facebook ku difaacay Wasiir Xoosh, isagoo eedeyn ugu jeediyay Fiqi.
Xildhibaan Fiqi ayaa Cali Yare ugu jawaabey: "Maanta ayay ka xun tahay Cali Yare ee midkaas waa laga yimide, midka maanta jira ee dawladnimada iyo hey'adihii dawladda lagu burburinayo ayaa ka hadal nooga baahan, inaad wax la soo dhaafey umadda ku mashquuliso oo waxa jira aad nooga leexiso ma dhaceyso".
Farmaajo ayaa ku eedeeyay Baarlamaanka inuu ka gaabisay shaqooyinkiisa qaran.
Fiqi oo Farmajo u sheegay halka uu Mooshinka isaga difaaci karo [Daawo]
Soomaliya 11.12.2018. 10:01
Gollaha Shacabka oo fariin u diray Xukuumadda iyo dowlad-goboleedyada
Soomaliya 24.10.2018. 14:04
Aqalka Sare oo shaaciyay xilliga uu furmayo Kalfadhigiisa 4aad
Soomaliya 01.10.2018. 22:23
Xildhibaan ka tirsanaa Gollaha Shacabka oo is casilay [Sabab]
Soomaliya 19.08.2018. 11:42
CC Shakuur oo weerar afka ah ku qaadey Fahad Yaasiin: Wiil sida Godane isku qariya
Soomaliya 14.04.2019. 13:40
Gollaha Shacabka oo markale ka doodaya Miisaaniyada 2019
Soomaliya 30.12.2018. 10:58
Fiqi: Taladii Soomaaliya dad kooban ayay gacanta u gashay [Dhageyso]
Soomaliya 13.12.2017. 10:40
Gudoomiye ku xigeenada baarlamaanka Jubbaland oo la doortay 17.08.2019. 12:45
Afhayeenka baarlamaanka Jubbaland oo dib loogu doortay Kismaayo 17.08.2019. 11:59
Mid kamid ah raggii loo xukumay kiiska Caasha oo "dambiga qirtay" 17.08.2019. 11:16
Dowladda oo Puntland u gacan-gelisay shaqsi dil ka geystay Qardho 17.08.2019. 09:00
Qoyska Kenyan lagu dilay Boosaaso oo eedeyn u jeediyay dowladooda 17.08.2019. 08:00
Maxkamadda Sare ee Puntland oo bilaabeya dhageysiga kiiska Caasha 17.08.2019. 07:15